Eray bixin Eeg ah oo Naqshadeysan oo Noobs inta badan isku wareerta | Martech Zone
Erey-bixin Eeg ah oo Naqshadeysan oo Noobs inta badan ku jahwareersan
Axad, Febraayo 19, 2017 Sabti, Febraayo 18, 2017 Douglas Karr
Wax yar baan yara guntay markaan helay sawirradan maxaa yeelay, sida ay noqotay, waa inaan noqdaa naqshad qaabdhismeed. Laakiin, hoog, waa wax la yaab leh ogaanshaha inta aanan ka aqoon warshad aan si qoto dheer ugu dhex jiray 25-kii sano ee la soo dhaafay. Difaacayaga, kaliya waan xashaashaa oo waxaan codsadaa sawirada. Mahadsanid, naqshadeeyayaasheena ayaa aad uga aqoon badan naqshadeynta garaafka aniga.
Waxaad ubaahantahay inaad ogaato farqiga udhaxeeya ereyadan sida caadiga ah loo fahmay iyo ereyada naqshadeynta garaafka maxaa yeelay maskaxda ku haysa, ma tihid fudud suuq iyo naqshadeeye, sidoo kale waxaad tahay qoraa. Waa inaad ogaataa alaabtaada! Aamina Suleman
Aamina iyo kooxda at ThinkDesign isku keen muuqaalkan weyn ee 14-ka eray ee ugu khaldan ama ereyo qalad ah oo ay adeegsadeen noobiyaasha sawirada.
Font iyo Typeface
Nooca qoraalka farta ma aha far, laakiin font waxaa laga yaabaa inay ka tirsan tahay qoys nooc ka mid ah noocyada qoraalka.
Raadinta ka soo horjeedka Kerning
Raadintu waa meesha labis ee u dhexeysa koox xarfo ah, kerning waa kala dheereynta jilayaasha shaqsiyadeed.
Gradient iyo Gradient Mesh
Wehliyaha kala-guurka waa tartiib-tartiib uga gudbid midab illaa mid kale dusha sare ee qaab. Mesh gradient waa qalab ku abuuraya mesh qaab leh dhibco badan, oo wax laga beddeli karo oo u oggolaanaya midabada, hooska, iyo saamaynta cabbirka.
Backdrop iyo Asalka
Backdrop waxaa loola jeedaa maro ama go 'shaashadda ka laadlaada shay gadaashiisa, laakiin asalka ayaa ah wax kasta oo ka dambeeya shayga diiradda lagu saarayo sawir ama naqshad.
EPS iyo AI
EPS waa la soo koobay qoraal ahaan, qaab fayl ah oo keydinaya sawirrada dulinka dulfuulan oo aan taageerin hufnaanta. AI waa Adobe Illustrator qaab ka kooban vector lakab ah ama walxo raster gundhig ah oo la tafatiri karo iyadoo la adeegsanayo Sawirka.
Tint iyo Tone
Tint waxaa lagu soo saaraa iyada oo lagu daro cad midab saafi ah, kordhinta iftiinkiisa. Tone waa chroma-ka midabka, waxaa la soo saaraa marka cawl lagu daro midabka.
Xaraf ka soo horjeedka Wordmark
Calaamadda xarafku waa astaan ​​loo qaabeeyey qaabab kala duwan oo xarfaha ah sida xarfaha hore ama soo gaabinta. Calaamadda ereyga ayaa ah daaweyn qoraal oo gaar ah oo loo adeegsado qoraalka ku jira astaanta shirkadeed ama calaamadda sumadda.
Hue iyo midabka
Hue waa qaabka ugu nadiifsan midabka, ma ahan hooska ama midabka. Midabbada midabku waa casaan, oranjo, jaalle, cagaar, buluug iyo casaan. Midabku waa erey dhan-koobaya oo tilmaamaya midab, hoos, midab iyo midab. Qiimaha kasta oo midabku leeyahay waxaa loola jeedaa midab.
DPI iyo PPI
DPI waa tirada dhibco bog kasta oo la daabacay. PPI waa tirada pixels halkii inch ee sawirka dhijitaalka ah.
Meel Cad oo ka soo horjeedda Meel xun
Meesha cad waa qayb ka mid ah bogga bidix ee aan calaamadeysnayn. Waxay noqon kartaa midab kasta, ma ahan kaliya caddaan. Meel taban waa naqshad ula kac ah oo ka maqan wax walboo naqshadeyn ah si ay u soo saarto dhalanteed muuqaal ah.
Wireframe iyo nooc kale
Qalabka loo yaqaan 'Wireframe' waa naqshadeynta naqshadeynta loo isticmaalo qaabeynta maskaxda iyadoo la adeegsanayo sawir ama qalab. Noocyada noocyadu waa matalaad sax ah ee naqshadaha meesha aad kula falgeli karto ka hor dhammaystirka iyo soo saarista mashruuca.
Bitmap iyo Vector
Bitmaps, ama sawir gacmeedyada sare, waa sawir aan la dafiri karin oo laga sameeyay shaashadda pixel. Qaababka guud waa GIF, JPG / JPEG, ama PNG. Naqshadeynta Vektor-ka ayaa ah naqshad wax laga beddeli karo oo laga sameeyay qaaciidooyinka halkaasoo cabirku uusan wax isbeddel ah ku keenaynin tayada. Qaababka guud waa AI, EPS, PDF, iyo SVG.
Madow & Caddaan oo kale
B / W ama B&W rakibaadda waxaa laga sameeyaa madow iyo caddaan saafi ah. Miisaanka cirka waa sawirro ama farshaxanno leh qiyam kala duwan oo caddaan ilaa madow ah midab kasta ama hooskiisa.
Abuurka iyo Calaamadaha Dalagyada
Abuurista waxay ka saareysaa qaybaha kore ee sawirka aan la weydiisan karin. Calaamadaha Dalagyada waa xariiqyo lagu daray geesaha sawirka si ay uga caawiyaan madbacadaha jarista iyo qaabeynta.
Shuruudaha 14-ka Ugu Sarreysa Ee Si Khaldan Loo Fahansan Yahay Oo Ay U Adeegsadaan Naqshadayaasha Naqshadeynta Noob
Haddii sharraxaaddayda kor ku xusan aysan ku filnayn, waa kan faahfaahinta tusaalooyinka:
Tags: Aamina Sulemanadobe sawir qaadeaiDhabarka dambeBackdrop iyo AsalkabackgroundBitmapBitmap iyo VectormidabkaCalaamadaha DalagyadaGoobiddaAbuurka iyo Calaamadaha Dalagyadaeraybixinta naqshadayntadpiDPI iyo PPIqoraal koobanepsfontFont iyo TypefacebaaxadMesh WehliyahaGradient iyo Gradient Meshdesign graphicqaabab qaabeed qaabeederaybixinta naqshadeynta garaafkahyomidab midab lehharaatisumadda warqaddacalaamadda qoraalka oo ka soo horjeedda ereyga qoraalkalogodesignguruMeelaha aan xuneynppinoocoodaraajoereyadafikirkamidabmidab ka soo horjeedka codkamidabraadraacaRaadinta ka soo horjeedka KerningNooca la taaban karovectorvector iyo rasterbooska cadMeel Cad oo ka soo horjeedda Meel xunWireframeWireframe iyo nooc kalecalaamadda ereyga
5 Su'aalood oo la Weydiiyo La-Taliyaha Kireynta Mashiinka Raadintaada
8 Siyaabood oo Aad Ugu Abuuran Kartid Abuur Macaamiil
Tani si aad u wanaagsan ayaa la isugu geeyay. Mahadsanid adiga iyo Aamina Suleman, shaqo wacan.